Kedu ka m ga esi mepụta njikọta na ebe nrụọrụ weebụ m dị ka onye na-emepụta redlink azụ?
N'oge a, onye ọ bụla maara mkpa ọ dị njirimara njikọ njikọ maka ọganihu ọ bụla na saịtị ọ bụla. Ọ dịghịkwa mkpa ịsị na àgwà ahụ na-enwekarị ihe dị ukwuu ebe a - chefuo oge ochie ahụ mgbe nnukwu backlink ọnụ jiri bụrụ ihe ndị dị elu, kama ịbụ ezigbo àgwà ha. N'okpuru ebe a, m ga-agwa gị banyere ụzọ kachasị mma kachasị mma iji nweta njikọ dị mma, ma ọ bụ m na - ekwusi ike - dị ka njikwa generator backlink na-enweghị mmebi. Ya mere, ka anyị lee otú ị nwere ike isi nweta backlinks dị mma, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịsị na ị ga-eme N'onwe Gị ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka akwụkwọ ozi ndị ọbịa na-eme ka gị na onye na - ) na nloghachi.
A na-ejikarị usoro ochie nke njikọta njikọta (ma ọ bụ nke ọzọ, wiil njikọ) maka iwuli nnukwu ndekọ nke backlinks dị mma - servers for minecraft 1.5.2. A na-amarakwa na njikọ njikọ maka generator generator akpaka. Usoro a na-enyekarị ohere ịnweta otutu njikọ gbanwere, dịka ọmụmaatụ n'etiti saịtị gị yana weebụsaịtị ndị ọzọ (i. e. , akwukwo blog ndi ndi na-ede blọgụ ibe gi na-edozi, ma obu ma eleghị anya ndi ozo di njikere ma kwadoo itinye aka na ntukwasi obi nke ndi otu a).
N'ezie, ịga maka mgbanwe njikọ nwere ọtụtụ abamuru, ma e wezụga ihe ize ndụ ọ nwere iji nweta ụgwọ ọrụ ogo site na engines ọchụchọ - maka n'akụkụ abụọ nke azụmahịa ahụ. Ekwuru m na n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-enwe obi ike ma ọ dịkarịa ala iji nwalee ya otu ugboro - naanị n'ihi na nke a bụ ụzọ ziri ezi ndị mmadụ na-enyerịta uru. Ya mere, ịme ka isi na-elekwasị anya n'ikike gị na-ekwe nkwa, ọ bụghị ihe mgbapụta ndị nwere njikọ metụtara njikọ, a na-atụ aro ka ị kpachara anya. Ekwuru m na ịnwe blog ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche iji nwalee atụmatụ a maka oge mbụ ga-abụ mkpebi zuru oke nke ọma iji ghọta ụkpụrụ iwu nke egwuregwu ahụ tupu oge eruo, n'enwetaghi ntaramahụhụ ozugbo.
Onye ọbịa Blog Posts
Nwekọrịta njikọ nwere ike iyi ka ihe dị egwu ọbụna ịnwale ya otu ugboro, nri? Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta ụzọ ọzọ nke mma njikọ njikọ - ide akwụkwọ blog ọbịa. Mgbe emezuru, blogging ọbịa nwere ike ịghọ nhọrọ nwere ezi uche nke nwere ike ịme gị ka ị rụọ ọrụ dị ka onye na-arụ ọrụ na redirect backlink na nke gị. Na-eche ezigbo ike nke ndị ọbịa - emela ka oge gị dee ederede zuru oke dị mma. Ozugbo enwere nkwekọrịta mbụ ị ga-ebi na blog ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-egosi na ịntanetị nwere akwụkwọ zuru ezu na ikike mpaghara, oge eruola iji tinye oge gị na mgbalị gị ede.
Ozugbo isiokwu gị ma ọ bụ akwụkwọ ozi gị dị njikere, ihe niile ị chọrọ bụ ịkwado ya maka ịnwetaghachi azụ azụ azụ na azụ. Site n'ụzọ, site na ndị isi engines ọchụchọ (dịka Google n'onwe ya), usoro a bụ ma ọ bụ onye kasị dịrị nchebe. Ya mere, ị kwesịrị ịnwa ịnweta inweta backlinks dị mma na posts ndị ọbịa na agbanyeghị. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na a na-ejikarị ebe ị ga-esi na-ebute okporo ụzọ ndị a na-elekwasị anya na weebụsaịtị, usoro ndị a bụ ndị ọhụrụ na ndị ọkachamara.